न युवाहरुले लिन सके, न बुढाहरुले नै दिन चाहे – Nepal Japan
न युवाहरुले लिन सके, न बुढाहरुले नै दिन चाहे
गुटका नेताको दौराको फेर समातेर आफ्नो समृद्धिको सोपान ठड्याउन मात्र उद्यत हुनु देशप्रति धोका हो
नेपाल जापान १ भाद्र १३:०४
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुलु कको उन्नति, प्रगतिको आशासहित अग्रभागमा रहेर सकस व्यहोर्ने युवाहरु मुलुक हाँक्ने नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न सकेनन् र उनीहरुकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेकाहरुले कहिल्यै युवालाई अवसर दिन चाहेनन् । परिणामतः युवाहरु आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न नेताहरुको, गुटको पछिलाग्न बाध्य भए ।
अहिले मुलुकका प्रमुख तीन दलभित्रका युवाहरुको अवस्था हरे यो स्पष्टै हुन्छ । उनीहरुलाई पार्टीको नीति, आदर्श, सिद्धान्त र मुलुकको आवश्यकता हैन आफ्नो समूहको शक्ति चाहिएको छ, त्यसैबाट आफ्नो उन्नति हुने ठानेर घर भत्काएर कटेरोमा बास बस्नन पुगेका छन् ।
यसमा दोष नेतृत्वको जति छ त्यति नै युवाहरुको पनि छ । उनीहरु आपसमा एकताबद्ध भएर देश र समाजका लागि हैन आपसमा विभक्त भएर गुट र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अघि बढ्छन् । आफ्नो स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार र क्षमता सबै दाउमा राखेर व्यक्तिपूजामा तल्लिन रहने युवाहरुको प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन ।
अहिले मुलुकका कुनै पनि क्षेत्र, पक्ष, विषय र सन्दर्भ जताबाट जोडे पनि, मोडे पनि स्वतन्त्रता खोज्नै सकिंदैन । स्वतन्त्रता खोसेको छ राजनीतिले र समाजका हरेक अंग अतिराजनीतिकरणको शिकार भएर सबै गुटबन्दीमा छन् । जसको परिणाम कहीं न कहीं कुनै न कुनै रुपमा दलीय राजनीतिक स्वार्थ र गन्ध घुसिहाल्छ । राजनीतिको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा पार्टीहरु मात्रै हुन्छन् ।
जो पार्टीमा लागेको छ, नेताको पछि लाग्छ उ राजनीतिक कार्यकर्ता– अगुवा ! जोसंग राजनीतिक सोच, विवेक र क्षमता छ तर उ कुनै दलमा आबद्ध छैन भने ऊ गैरराजनीतिक ठहरिन्छ !! राजनीति गर्नुको परिभाषा नै व्यावसायिक भएपछि नेपालको अवस्था योभन्दा फरक हुने त कुरै भएन । यसलाई चिर्न, जनतामा राजनीतिक दलप्रति बढेको वितृष्णा हटाउन युवाहरु एकजुट भएर कम्तिमा आफ्नो आबद्धता भएको दलको नीति, नारा, सिद्धान्त र विचारमा प्रतिबद्ध भएर गुटबन्दी त्यागेको घोषणा गर्नसके देशमा अलिकति सुशासनको माहोल सिर्जना हुनेछ ।
तर, व्यापारिकरण भएको राजनीति र त्यो राजनीतिमा अभ्यस्तहरुमा आत्मा साक्षी राखेर साँचो कुरा बोल्ने नैतिकता छैन । राम्रोलाई राम्रो भन्नसक्ने हैसियत गुमाउँदै गएका छन् । आफ्नो सबै राम्रो र अरुको सबै नराम्रो भन्ने–मान्ने गलत संस्कृतिको विकासले स्थानीयदेखि सिंहदरबारसम्मै जरा गाडेको छ । गाउँघरका सामान्य राजनीतिक दलका समर्थकमा समेत आफूले समर्थन गरेको पार्टी र त्यसका नेताहरु सर्वगुण सम्पन्न देख्छन्, अरुमा केही गुण नै देख्दैनन् । यो विभाजनकारी र विभेदकारी सोचका कारण समाज जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो विकासको बाधक हाम्रो आफ्नै संस्कार, संस्कृति र भैरहेको अभ्यास हो भन्ने बुझ्नै चाहेका छैनौं ।
मानिस चेतनशील प्राणी भएकाले उसले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफ्नो चेतना प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो चेतना केवल उसको आफ्नो लागि मात्र नभएर अरुका लागि पनि केही न केही सहयोगी हुनुपर्दछ । तर अहिले “मैखाउँ, मै लाऊ”को समय चलेको छ र त्यसका लागि राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर अवसर छोप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
हामी अरुले देला र खाउँला भनेर बसिरहने यो पुस्ताका ऊर्जाशील युवाहरु बधुवा पशुजस्तो जता डोर्यायो उतै जाने बनिरहने कि स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्दै देश विकासमा अग्रसर हुने ? यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिमा लागेका युवाहरुले नै दिनुपर्छ । कम्तिमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलसंग विमती राखे पनि आफ्नै दलका नेताहरुसंग त एकमत हुनुपर्ने हो नि ! तर हैन, त्यहाँ दलभन्दा गुट बलियो र त्यो गुटलाई मलजल गर्ने युवाहरु नै भएकाले यो पुस्ताले कहिल्यै अवसर नपाउने भयो र पायो भने पनि स्वर्थले असल काम गर्न नसक्ने भयो ।
हुन त राम्रो–नराम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा भरपर्छ । एउटालाई राम्रो लागेको अर्कोलाई नराम्रो र अर्कोलाई राम्रो लागेको झन अर्कोलाई नराम्रो लाग्नसक्छ । यो स्वाभाविक हो । तर, समग्रमा राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्दासम्म मानव समाज माथी उठ्दैन । विशेष गरी युवा पुस्ता जो राजनीतिमा सक्रिय छन् उनीहरुले यस्तो संस्कार बसाल्न सके आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई राम्रो काम मात्र गर्न दवाव दिनेछ जसको परिणाम मुलुक उन्नत हुनेछ । तर यहाँ आफ्नो आत्मा मारेर आत्माले नचाहँदा नचाहँदै कसैको स्वार्थका लागि झूठो बोल्नुपर्ने बाध्यता छ जुन समाज विकासको सबभन्दा खराब पक्ष हो ।
विगतमा जे भयो भयो, अब गुट वा आफ्नो हैन, देश र जनता भनेर अघि बढौं ! मुलुक संगीन घडीमा उभिएको छ- अस्थिरतासंगै प्राकृतिक र कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई सही दिशादिन हरेक दलमा रहेका युवाहरु गुटबन्दी छाडेर मुलुकको आवश्यकता अनुसार आफ्नो दलको नेतृत्वलाई सोही अनुसार अघि बढ्न दवाव सिर्जना गर्न सक्षम हुन् ! अलिकति ढिलै भए पनि युवा दिवसको शुभकामना !